‘मेघास्टार’ को ? अनमोलको आयो कडा अभिव्यक्ति ! | Sagarmatha TVSagarmatha TV ‘मेघास्टार’ को ? अनमोलको आयो कडा अभिव्यक्ति ! | Sagarmatha TV
‘मेघास्टार’ को ? अनमोलको आयो कडा अभिव्यक्ति !
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र बजारमा कलाकारहरुकै विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाले चर्चा पाउने गरेको छ । गोपीमा दुई वर्षाको विषय होस् या चलचित्र रोजी र राम कहानी नै किन नहोस् । अहिले पुनः युवा स्टार नायक अनमोल केसी र चर्चित अभिनेत्री रेखा थापोको प्रसंग चर्चाको विषय बनेको छ ।
गएको महिना अभिनेत्री रेखा थापाले एक अन्तर्वार्ता दिँदै सुपरस्टार अनमोल केसीलाई लक्षित गर्दै २÷३ फिल्म हिट भएको भरमा नयाँलाई ‘मेघास्टार’ भनिनु गलत रहेको भन्दै दुखेसो पोखेकी थिइन् । यही विषयलाई लिएर नायक अनमोल केसीले पनि मुख खोलेका छन् । उनले दिएको अभिव्यक्ति व्यंग्य तरिकाको पनि छ । पन्ध्र वर्षदेखि ‘ब्याक टू ब्याक’ हिट फिल्म दिएपनि मिडियाले आफूलाई भने ‘मेघास्टार’ र ‘महानायिका’ भन्न डराएकोमा नायिका रेखा थापाको चित्त दुखाई थियो । उनको यो अभिव्यक्तिले सिनेवृतमा ठूलै तरंग समेत मच्चिएको थियो ।
आफूले आफ्नो लागि ट्याग खोजेको भन्दै सिनेवृत्तमा आलोचना भयो । विवादले उग्र रुप लिएपछि अभिनेत्री थापाले आफ्नो पछिल्लो चलचित्र ‘मालिका’ को गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई ‘मेघास्टार’ र ‘महानायिका’ को ट्याग नचाहिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन् । यसले उनमा भित्री रुपमा अहंमता अझै रहको प्रष्टिएका बेला एकपछि अर्को गर्दै बक्स अफिसमा हिट फिल्म दिएपछि नायक अनमोल केसीलाई युवा दर्शकले मेगास्टारको ट्याग भिराउ । त्यसताका अनमोलले ‘मेघास्टार’को विषयलाई कोट्याएनन् । रेखाको आपत्तिपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएनन् ।
हुनत, उनी आफ्नो बारे राम्रो हुन् वा नराम्रो कुनै कुराको टिप्पणी गर्दै हिँड्दैनन् । आफूलाई ‘मेघास्टार’ भनिएकोप्रति रेखाको रोइलोलाई पनि उनी सामान्य रुपमा लिन्छन् । शनिबार ‘अनमोल इभ’का लागि बुटवल उड्दै गर्दा अनमोलले रेखाको अभिव्यक्तिको विषयमा आफ्नो गहकिलो तर्क राखे । उनीभित्र गुम्सिएको पीडा गम्भीर तवरले पोखे । उनले भने– ‘टाइटल मागेर पाइने चिज होइन । टाइटल भनेको दर्शकले दिने कुरा हो । म त भर्खर आएको कलाकार हुँ । म आफूलाई स्टार सम्झिन्न ।’ उनी नायिका रेखा थापा आफ्नो लागि ‘रेक्सपेक्टेड आइडल’ रहेको बताउँछन् । ’उहाँको नेपाली फिल्म क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान छ’ अनमोलले थपे, ’मेरो लागि त उहाँ नै ‘मेघास्टार’ हो ।’ उनी अहिले आफ्नो छैठौं प्रोजेक्ट ‘क्याप्टेन’ मा व्यस्त छन् । हालै उनको चलचित्र क्याप्टेनको फस्ट लुक्स पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । उनले यो चलचित्रमा पहिलो पटक फुटबल खेलाडीको रुपमा भूमिका निभाएका छन् ।
चलचित्रको फस्टलुक्समा अनमोललाई मात्रै देखिएको छ भने अन्य कलाकारलाई समाबेश गरिएको छैन । अभिनेता भुवन केसीको होम प्रोडक्सन काजोल फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण भएको ‘क्याप्टेन’लाई दिवाकर भट्टराइको निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रको रिलिज मिति तय नगरिएको यस चलचित्रको प्रदर्शन मिति छिट्टै सार्वजनिक गरिने निर्देशक भट्टराइले जानकारी दिए । चलचित्रमा सरोज खनाल, सुनिल थापा, प्रशान्त ताम्राकार, विल्सन विक्रम राई लगायतका कलाकारको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ । प्रियंका एमभी र उपासना सिंह ठकुरी नयाँ नायिकाको रुपमा यसै चलचित्र बाट डेब्यू गरेका छन् । चलचित्रमा एक यूवाको फुटबल संघर्षको कथा प्रस्तुत गरिएको यस चलचित्रको कथा सामिप्यराज तिमल्सिनाले लेखेका हुन् ।
सार्वजकिन पोस्टरमा जितका लागि गोल हान्न मैदानमा संघर्षरत एक फुटबल खेलाडीको अवस्थामा अनमोललाई चित्रण गरिएको छ ।
पोस्टरको ब्याकग्राउण्डमा उनी ११ नम्बरको जर्सीमा खेल मैदानतर्फ निहालिरहेका छन् । जर्सीमा उनको नाम ‘इशान’ लेखिएको छ । गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी बन्न एउटा युवाले गरेको संघर्षको कथा फिल्म ‘क्याप्टेन’ ले बोल्छ । ‘क्याप्टेन’ मा यसपटक अनमोलले दुई नव–अभिनेत्रीसँग स्क्रिन साझेदार गरेका छन् । ‘क्याप्टेन’ मा चन्द्र पन्तको द्वन्द्व, अर्जुन पोखरेलको संगीत, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी छ भने सम्पादनको जिम्मेवारी दीर्घ खड्काले सम्हालेका छन् । सुदीप बराल डिओपी रहँदा क्यामेरामेनमा नवराज उप्रेती छन् । अनमोल गएको वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘कृ’ पछि ‘क्याप्टेन’ मार्फत् पर्दामा देखिन लागेका हुन् ।
यसैबीच नायिका रेखा थापा पनि अहिले आफ्नो चलचित्र मालिकामा व्यस्त भएकी छिन् । मालिका चलचित्रका दुई वटा गीत रिलिज भइसकेका छन् । सामाजिक अचियान्ताका रुपमा समेत परिचित रेखा पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका कारण केही समय चलचित्रबाट टाढा रहेकी थिइन् । राजनीतिमा लागेपनि उनले चलचित्रलाई भने माया मारेकी छैनन् । चलचित्र ‘मालिका’ तिहारको मौका पारेर कार्तिक २१ गते लक्ष्मी पूजाको दिनमा प्रर्दशनमा आउने छ ।